Somaliland: Madaxda Xisbiyada Qaranka Oo Caadeystay Inay Isku Eedeeyaan, Falalka Lidka Ku Ah Tartankooda Ee Taageerayaashooda Khaldani U Badheedhaan - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Madaxda Xisbiyada Qaranka Oo Caadeystay Inay Isku Eedeeyaan, Falalka Lidka Ku...
Somaliland: Madaxda Xisbiyada Qaranka Oo Caadeystay Inay Isku Eedeeyaan, Falalka Lidka Ku Ah Tartankooda Ee Taageerayaashooda Khaldani U Badheedhaan
Masuuliyiin ka mid ah Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID, ayaa sheegay in la waxyeeleeyay Xafiis uu Xisbigoodu ku leeyahay Degmada 26-ka June ee Magaalada Hargeysa, gaar ahaan Xaafadda Boqol iyo Kontonka.
Xoghayaha Golaha dhexe ee Xisbiga UCID Mr. Jiir iyo masuuliyiin kale oo ka mid ah Xisbigaasi oo Shalay Saxaafadda kula hadlay afaafka hore ee Xafiiska UCID ee Xaafadda 150-ka ee ay sheegeen in la waxyeeleeyay, ayaa waxyeelada la soo gaadhsiiyey Xafiiskooda ku xidhiidhiyey Xisbul-Xaakimka KULMIYE.
Xoghayaha Golaha dhexe ee UCID Mr. Jiir oo ugu horreyn halkaa ka hadlay ayaa yidhi “Xafiiskii UCID ee degmada 26-ka June ee Hargeysa waxa laga gooyey Boodhkiisii. Dhallinyaro iyo Dad waaweyn ayaa u yimid Gabadhii guriga lahayd, waxay ku yidhaahdeen ma doonayno inay Xafiiskaa timaaddo Cid kale, Xisbiga KULMIYE mooyaane, sidaasina Sharciga ku munaasib maaha, Doorashadana ku munaasib maaha, Dimuqraadiyaddana ku munaasib maaha..”
Jiir waxa kale oo uu sheegay “Waa markii ugu horreysay ee aanu Maqalno waxaa Xaafadda ka dhacaya, waxaan leeyahay Magaalada waa loo siman yahay oo waa Caasimad. Waxaan leeyahay haddii Muuse Biixi ay Abtinimadiisu ka shaqeynayso Maxamed Mooge iyo Maxamuud Haybe, Abtinimadii Faysal-na ay Ceeb iyo fadeexad ka dhex noqoto Degmooyinka 26-ka Juun iyo Ibraahim Kood-buur, waa waxaan Munaasibad ku ahayn Dhaqanka..” ayuu yidhi.
Xubin ka mid ah Masuuliyiinta UCID oo isaguna halkaa ka hadlay ayaa yidhi “Boodh la gooyaa boodh la gooyo ayuu leeyahay. Waxaan leeyahay (Taasi) waa mid dimuqraadiyadda ku ceeb ah, waa mid Somaliland ku ceeb ah oo waxyeelaysa. Waxaan leeyahay..”
Haweenay ka mid ah Garabka Haweenka ee Xisbiga UCID oo Shirka jaraa’id ka hadashay ayaa sheegtay “Muusoow waxaan leeyahay 26-ka Juun kuguma filla..” ayay tidhi, iyadoo Falkan ay sheegeen in Xafiiskooda 150-ka lagula kacay uu masuul ka yahay Musharraxa KULMIYE.
Sidan oo kale, ayaa Xafiis uu Xaafadda New Hargeysa ee Caasimadda ku leeyahay Xisbiga KULMIYE looga googooyey Calaamadihii Xisbiga, halka Xisbiga WADDANI-na sidaas oo kale Xarumo uu Gobollada Togdheer, Saaxil iyo Gabiley ku leeyahay loo waxyeeleeyay, laakiin Masuuliyiinta ugu sar-sareysa Xisbiyadu iyagoon ka hadal sida loo sixi karo khaladaadkaasi, ayay ayuu midba mid kale ku eedeeyay inuu ka masuul yahay Falka lagu waxyeeleeyay Xafiisyadiisa.
Xilligan lagu jiro Diyaar-garowga Doorashada Madaxtooyada Somaliland, ayaa waxa Xaafadaha Caasimadda Hargeysa iyo Magaalooyinka kale ee Dalka ka dhaca Falal aan wanaagsanayn, oo dhallinyaro Xisbi u jibbaysani u geystaan Xafiisyada ay leeyihiin Xisbiyada aan ahayn ka ay taageersan yihiin, falalkaasi oo la mid ah ka uu hadda ka cabanayo Xisbiga UCID.
Balse, inta badan Masuuliyiinta sar-sare ee Xisbiyada Qaranka oo laga yaabo inay ogyihiin inay Falalkaasi ku kaceen taageerayaal khaldan, ayaa haddana midba uu midka kale si toos ah ugu eedeeyaa inuu ka masuul yahay waxyeelada loo geysto Xafiisyada Xisbiyadooda, kuwaasi oo hadday si gaar ah uga wada xidhiidhaan Madaxda Xisbiyadu ay si asluubaysan u suulin karaan.